‘YouTube’ irratti daa'imni waggaa torbaa dolaara miliyoona 22 argata. - Oromia Broadcasting Network - OBN
Dolaara miliyoona 22 argachuudhaan daa'imni waggaa torbaa ashaangulliota (toy) keessa deebiyee ilaalu tokkomucaa YouTube irratti nama hundaa ol argatu ta'een beekameera.
Dolaara miliyoona 22 argachuudhaan daa’imni waggaa torbaa ashaangulliota (toy) keessa deebiyee ilaalu tokkomucaa YouTube irratti nama hundaa ol argatu ta’een beekameera.
Akka barruun Foorbiis argadhe jedutti daa’immni Ryan jedhamu Ryan ToysReview nama v Jake Paul jedhamuun dolaara 500,000 caaleera. Viidiyoowwan guyyaa guyyaan kan fuula You Tube irratti ba’an yommuu ta’u kan mata duree blue giant myself jedhu fuula Ryan qabatee bahe Dilbata kaleessaa irraa eegalee si’a miliyoona daawwatameera.
Dude Perfect channel kan jedhamu ammoo dolaara miliyoona 20 argachuudhaan sadaffaadha jedheera Foorbiis.
Ijoolleen maaliif viidiyoo isaa kana jaallatu jedhamee NBC irratti gaafatamee, sababiin isaan jaallataniif ani waanan isaan bohaarsuufi anis nama taphataa waanan ta’eef,” jedhe Ryan
Chaanaaliin kun erga maatii Ryaniin Bitootessa 2015 banamee, viidoyoon kun namoota miliyoona 26 ta’aniin daawwatameera, hordoftoota miliyoona 17.3 ta’anis horateera.
Ashaangulliitonni (toys) takkaa viidiyooo sanaan mullatan dafanii gabaarratti gabaa gaariin argachuunis ni gurguramu.Ammallee daa’ima waan ta’eef galiin Ryan argatu keessaa %15 lakkoofsa baankii herregaa keessa akka ture taasifamee yeroo umurii seeraan ga’eessa ta’e qofa fudhachuu danda’a.Maddi:-BBC
05 Mud 2018 8.54 Wb
Total Hits : 76434